Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)ဆိုတာဘာလဲ။
Chronic Heptitis ဟာ ၆ လ ထက်ပိုပြီး အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများမာ လက္ခဏာမပြတတ်ပေမယ့် မသေချာတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်းဟာ အသည်းခြောက်ခြင်းနဲ့ သရက်ရွက်ကြီးခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း အရည်စုပြုံခြင်း၊ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းဆောင်တာပျက်စီးခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Chronic Hepatitis ဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Chronic hepatitis ရဲ့ လူနာပေါင်း သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ သူဟာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်လာတတ်ပြီး အသည်းခြောက်ခြင်း မဖြစ်မချင်း လက္ခဏာ ပြခြင်း မရှိပါဘူး။ ကျန်တဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံမှာတော့ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ (သို့) ဆက်ကျန်နေတဲ့ ရုတ်တရက်အသည်းရောင်ခြင်းအပြီး ဆက်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေမကောင်းခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း အစရှိတဲ့ တိကျိမှုမရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာ အဖျားတက်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက် မကောင်းဖြစ်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသားဝါခြင်းကတော့ ရှားပါးပါတယ်။
တခါတရံ သေချာတဲ့ ပထမဆုံးလက္ခဏာတွေကတော့ နာတာရှည်အသည်းရောဂါ (သို့) အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပြီး သရက်ရွက်ကြီးခြင်း၊ သေးငယ်တဲ့ ပင့်ကူပုံစံသွေးကြောတွေ အရေပြားပေါ်မှာ မြင်နိုင်ခြင်း၊ လက်ဖဝါး နီရဲခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း အရည်စုပြုံခြင်းပါဝင်ပါတယ်။
အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ ပျက်စီးခြင်းဟာ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ဒါကို hepatic encephalopathy လို့ ခေါ်ပြီး သွေးခဲနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပါ ပျက်စီးစေကာ သွေးပိုထွက်နိုင်စေပါတယ်။ သွေးအတွင်းအဆိပ်ရှိတဲ့ အရာတွေ စုပြုံပြီး ဦးနှောက်ရောက်သွားခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖြိုခွဲပြီး အန္တရာယ်မရှိတဲ့ အရာတွေအဖြစ် သွေးအတွင်း၊ သည်းခြေရည်အတွင်းမှ စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ ပျက်စီးနေတဲ့အသည်းက သူတို့ကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
အချို့လူတွေမှာ အသားဝါခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အဆီပါပြီး အနံ့နံသော ဝမ်းသွားခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ အသည်းအပြင်ဘက်မှာ သည်းခြေရည် စီးဆင်းမှု ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Autoimmune အသည်းရောင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓါစနစ်အတော်များများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး လက္ခဏာတွေကတော့ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း၊ အရိုးနာကျင်ခြင်း၊ အဆုတ် အမာရွတ်ထင်ခြင်း၊ Thyroid gland ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းနဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေက Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်းဟာ အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ် C ပိုးဟာ ၆၀-၇၀% သောသူတွေမှာ ဖြစ်စေပြီး ရုတ်တရက်အသည်းရောင် C ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့ အနည်းဆုံး ၇၅%ဟာ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင်B ပိုးရှိသူတွေရဲ့ ၅-၁၀% နဲ့ D ပိုးနဲ့ တိုးဖြစ်တဲ့သူတွေဟာလည်း နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင် D ပိုးဟာ သူတစ်မျိုးတည်းမဖြစ်ပဲ B ပိုးနဲ့ တွဲပြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး အသည်းရောင် E ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အာရုံကြောစနစ် အားနည်းနေသူတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်ပြီးသူများ၊ ကင်ဆာဆေးသောက်နေသူများ၊ HIV ရောဂါပိုးရှိသူတွေမှာ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင် A ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်စေခြင်း မရှိပါဘူး။
အချို့ဆေးတွေဟာလည်း ကြာရှည်သောက်သုံးတဲ့အခါ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကတော့ isoniazid, methyldopa နဲ့ nitrofurantoin တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အရက်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းနဲ့ အရက်ကြောင့် မဟုတ်တဲ့ အသည်းရောင်ခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်နည်းတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ alpha1-antitrypsin deficiency, celiac disease, thyroid disease နဲ့ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ Wilson disease (အသည်းမှာ ကြေးနီဓါတ်များခြင်း) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်းရှိသူ အတော်များများမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်း မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ လူအချို့မှာ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓါက ကိုယ်ပိုင်တစ်ရှူးတွေကို တိုက်ခိုက်နေလို့ ဖြစ်တဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ တူပါတယ်။ ဒါကို autoimmune hepatitis လို့ခေါ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
အချို့သူတွေမှာ ဘာကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးမျိုး (သို့) ဆေးတွေက နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း ဖြစ်စေပြီး အခြားသူတွေမှာ မဖြစ်စေလဲ၊ ပြင်းထန်မှု ဘာကြောင့် ကွာခြားလဲဆိုတာ သိရှိခြင်းမရှိပါဘူး။
ဘယ်အရာတွေက Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Chronic Hepatitis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသည်းရောင် B ပိုး
လိင်ဆက်ဆံဖက်များခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ အကာအကွယ်မပါပဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်း
ဆေးထိုးစဉ် အပ်ကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း
နာတာရှည် အသည်းရောင် B ပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေခြင်း
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ မိခင်က မွေးဖွားခြင်း
လူတွေရဲ့ သွေးနဲ့ ထိကိုင်ရခြင်း
အသည်းရောင် B ပိုးများတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Africa, Central and Southeast Asia, နဲ့ Eastern Europe ကို ခရီးသွားခြင်း
အသည်းရောင် C ပိုး
ရောဂါပိုးရှိသောသွေးနဲ့ ထိမိခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ အပ်နဲ့ အရေပြားကို ထိုးမိခြင်း
တရားမဝင်ဆေးတွေ ထိုးခြင်း၊ ရှူခြင်း
မသန့်စင်သော ကိရိယာတွေနဲ့ နားဖေါက်ခြင်း၊ တက်တူး ထိုးခြင်း
၁၉၉၂ မတိုင်မီ သွေးသွင်းဖူးခြင်း
၁၉၈၇ မတိုင်မီ သွေးခဲစေတဲ့ သွေးသွင်းဖူးခြင်း
အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကျောက်ကပ်သန့်စင်ကုသမှု ယူဖူးခြင်း
ရောဂါပိုးရှိသူ အမျိုးသမီးမှ မွေးလာခြင်း
၁၉၄၅ နဲ့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်အတွင်း မွေးသူတွေဟာ အသည်းရောင် C ပိုး အဖြစ်များပါတယ်။
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
ဆရာဝန်တွေက လူနာတွေမှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ အသည်းအင်ဇိုင်းများခြင်း၊ အရင်က အသည်းရောင်ရောဂါ ဖြစ်ဖူးခြင်း တွေ ရှိရင် နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်းကို သံသယရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၄၅ ကနေ ၁၉၆၅ အတွင်းမွေးသူတွေမှာလည်း ရောဂါလက္ခဏာပေါ် မမူတည်ပဲ သွေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်ကြားမှာ အသည်းရောင် C ပိုး အဖြစ်များပါတယ်။
သွေးစစ်ဆေးမှုတွေဟာ အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ ဘယ်လောက်ပျက်စီးနေသလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့နဲ့ အသည်းပျက်စီးမှု ပြင်းထန်မှုကို သိရှိဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ဆေးမှုက ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုလည်း သိရှိစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တွေ့ရှိမှုမရှိဘူးဆိုရင် အခြားအကြောင်းရင်းတွေ (ဥပမာ autoimmune hepatitis) ကို သိရှိဖို့ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းအသားစ ယူခြင်းဟာ ရောင်ရမ်းခြင်း ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာနဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကို သိရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အသည်းအသားစယူခြင်းဟာ အသည်းရောင်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိစေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အသည်းရောင် B ပိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် Ultrasound ကို ၆လ တစ်ကြိမ်ရိုက်ပြီး အသည်းကင်ဆာ ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာ အသည်းရဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ဆဲလ်တွေက ထုတ်တဲ့ alpha fetoprotein ပမာဏဟာ အသည်းကင်ဆာရှိရင် မြင့်တက်နိုင်တာကြောင့် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အသည်းရောင် C ပိုးရှိသူတွေဟာလည်း အထက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးသင့်ပေမယ့် သူတို့မှာ အသည်းခြောက်ခြင်း ရှိမှ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Regardless of the cause or type of chronic hepatitis, complications require treatment.
Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
တကယ်လို့ ဆေးကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် ဆေးကိုရပ်သင့်ပါတယ်။ အခြားအကြောင်းရင်းကြောင့်ဆိုရင်တော့ ကုသသင့်ပါတယ်။
အသည်းရောင် A ပိုး
အသည်းရောင် A ပိုးဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်ကုသလေ့ မရှိပါဘူး။ သင့်မှာ မသက်မသာ လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင် အိပ်ရာပေါ်မှာ နားနေသင့်ပါတယ်။ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းတွေ ဖြစ်ရင်တော့ အာဟာရချို့ယွင်းခြင်း၊ ရေဓါတ်ချို့ယွင်းခြင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အထူးအစားအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဟာလည်း ဒီအမျိုးအစားကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ antibodies တွေ ထုတ်ပေးတာမို့ အသည်းရောင် A ပိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ အသက် ၁၂ လကနေ ၁၈လ အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါတယ်။ လူကြီးတွေလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင် B ပိုးဟာလည်း ထူးခြားတဲ့ ကုသမှု မလိုအပ်ပါဘူး။ နာတာရှည် အသည်းရောင် B ပိုးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးတွေနဲ့ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုဟာ ဈေးကြီးပြီး လပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာတာရှည် အသည်းရောင် B ပိုးကို ကုသခြင်းဟာ ပုံမှန်စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ခြင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ CDC က အသည်းရောင် B ပိုးကာကွယ်ဆေးကို ကလေးငယ်တိုင်းမှာ ထိုးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးကို ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတိုင်းလည်း ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ဆေးတွေကို ရုတ်တရက်နဲ့ နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်းတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ နာတာရှည် အသည်းရောင် C ပိုးရှိသူတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကုသမှုအကောင်းဆုံး အမျိုးအစားကို သိရှိဖို့အတွက် အခြားစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင် C ပိုးကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းရောဂါဖြစ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် အသည်းအစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောင် D ပိုး
အသည်းရောင် D ပိုးကို alpha interferon လို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ Public Health Agency of Canada အရ ၆၀-၉၇%သော လူနာတွေဟာ ကုသမှုအပြီးမှာ အသည်းရောင် D ပိုး ပြန်ဖြစ်နိုင်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသည်းရောင် E ပိုး
အသည်းရောင် E ပိုးကို ကုသနည်း မရှိသေးပါဘူး။ ရောဂါပိုးဟာ ခဏတာသာဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးရှိသူတွေဟာ လုံလောက်စွာ အနားယူခြင်း၊ အရည်များများသောက်ခြင်း၊ အာဟာရ မျှတစွာစားခြင်း၊ အရက်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် corticosteroids (prednisolone) တွေကို ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ဖို့ azathioprine နဲ့ တွဲပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပြီး အသက်ပိုရှည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသည်းအမာရွတ်ထင်ခြင်းဟာ ဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးတွေကို ရပ်လိုက်ခြင်းဟာ ရောင်ရမ်းမှုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ လူအများစုဟာ ဆေးတွေကို တစ်သက်လုံးသောက်သင့်ပါတယ်။
နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်မှုမရှိပဲ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဟာ ကုသမှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းဆောင်တာမကောင်းဘူးဆိုရင် အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ ဆေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသည်းပျက်စီးခြင်းများတဲ့ လူနာတွေမှာ အသည်းအစားထိုးခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသည်းရောင် C ပိုးရှိသူ လူနာတွေမှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အစားထိုးထားတဲ့ အသည်းမှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပြီး အခြားအကြောင်းတွေအတွက် အစားထိုးခြင်းထက် အောင်မြင်နှုန်း နည်းပါးနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Chronic Hepatitis (နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ)ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Chronic Hepatitis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။ အရက်ဟာ အသည်းရောဂါတွေကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အသည်းပျက်စီးစေတဲ့ ဆေးတွေကို ရှောင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ သောက်နေတဲ့ဆေးတွေ၊ ဖြည့်စွက်စာတွေကို ပြန်လည်တိုင်ပင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်က အချို့ဆေးတွေကို ရပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အခြားသူတွေကို သင့်သွေးနဲ့ မထိပါစေနဲ့၊ သင့်မှာရှိတဲ့ အခြားအနာတွေကို အုပ်ထားပြီး ဓါးတွေ၊ သွားတိုက်တံတွေကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။ သွေးလှူခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါလှူခြင်း၊ သုက်ပိုးလှူခြင်း တွေမပြုသင့်ပဲ သင့်မှာ ရောဂါပိုးရှိကြောင်းကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ပြောပြပါ။ လိင်မဆက်ဆံမီ သင့်မှာ ရောဂါပိုးရှိကြောင်းကို သင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ပြောပြသင့်ပြီး လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Chronic Hepatitis. https://www.merckmanuals.com/home/liver-and-gallbladder-disorders/hepatitis/chronic-hepatitis. Accessed 26 Feb, 2017.
Hepatitis C. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hepatitis-c/home/ovc-20207365. Accessed 26 Feb, 2017.
Emphysema (အဆုတ်လေအိတ်များပျက်စီးခြင်း) ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ။ ။
ပန်းနာရင်ကြပ်နေရာဂါ ပြန်ထနေတဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်းသက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ။
အသည်းရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့အရာတွေ သင်ဘယ်နှမျိုး လုပ်မိနေသလဲ
ဈေးသွားတဲ့အိမ်ရှင်မတိုင်း သိထားသင့် ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ အန္တရာယ်။ ။
အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ရှောက်သင့်တဲ့ သင့်အသည်း